Naya Post Nepal | गायिकालाई उचालेर पल शाहलाई फ’साउने मुख्य नाइकेसम्म पुगेका हुन् त पलका वकील? (भिडियाे सहित)
गायिकालाई उचालेर पल शाहलाई फ’साउने मुख्य नाइकेसम्म पुगेका हुन् त पलका वकील? (भिडियाे सहित)
पल शाह प्र”करणले नयाँ मोड लिएको छ । कर णी मुद्दामा पी” डित भनिएकी किशोरी गायिकाले नै बयान फेरेपछि यो घ”टना फेरि कौतुहलको विषय बनेको छ । आफूमाथि कर णी भएको भन्दै जाहेरी दिएकी ती किशोरीले अहिले आएर उ”क्साहटमा त्यसो गरेको भन्दै बयान फेरेकी छन् ।
पी”डित भनिएकी किशोरीको तनहुँ जिल्ला अदालतमा बकपत्र भइसकेको छ । किशोरीका बाबुको बयान लिन बाँकी छ । उन को पनि छोरीकै लाइनमा बयान आउने अनुमान गर्न कठिन छैन ।
यसरी होस्टाइल हुनेहरूको हकमा अध्यादेशको व्यवस्थाअनुसार कारबाहीको दाबी गर्न सकिन्छ । नाबालिग भनिएकी किशोरी को स्वास्थ्य जाँच परीक्षणमा कन्या झिल्ली च्यातिएको देखिए को छ । तर, अदालतमा किशोरीको बयान पूरै फेरिएको छ ।
किशोरीले पलले आफूलाई कर णी नगरेको बताउँदै उक्साहटमा जाहेरी दिएको भनेकी छन् । उनले शुरुमा पोखरा, तनहुँ गैंडाको टमा पलले आफूमाथि कर णी ग रेको दा”बी गरेकी थिइन् । प्र लोभन र दबाबमा परेर अदालतमा बयान फेरेको शंका गर्न कठि न छैन ।
प्र”हरीमा आफैँले दिएको किटानी जाहेरीविरुद्ध अदालतमा हो” स्टाइल हुँदा किशोरी र बाबुमाथि पनि सजायँको कानुनी व्यव स्था हुन सक्छ । सरकारले केही समयअघि मुलुकी फौजदारी संहितासम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेको छ ।
उक्त अध्यादेशले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा ४४ मा संशोधन गर्दै सजायँको थप व्यवस्था गरेको छ । दफा ४४ को खण्ड (क) पछि थप व्यवस्था गर्दै झुटा उजुरी तथा बक पत्र गर्नेलाई सजायँको बाधा नपर्ने भनिएको छ ।
यो पनि ,,थुन’छेक आदेशपछि अदालतले बक’पत्र गराइरहदा पीडि त भनिएकी नाबालिगले ब’यान फे’रेकी हुन्। उनले पहिले भनेका सबै बया’न फेरेकी हुन
स्रोतका अनुसार उनले प्रभाव र द बा’बमा परेर त्यस्तो आ रोप लगाएको अदालतसमक्ष बताएकी छन् साथै आफूलाई प’लबाट बला त्कार नभएको पनि भनेकी छिन्।
पललाई गत चैत २३ गते ना बालिक माथि बलात् कारको आरो पमा नवलपुर जिल्ला अदालत ले पनि पु’र्पक्षका लागि थुनामा पठाउन आदेश दिएको थियो।
२०७९ बैशाख ११, आईतवार प्रकाशित 1 Minute 1567 Views